स्मृतिको कुनामा अनुभूतिको एक पहाड ,(विद्या सापकोटा)
म संस्मरण लेखौं भनेर बसेकी छु । स्मृतिको कुना–कुना अनुभूतिका थुम्काहरुले चुलिएका छन् । कतै ती कोमल बालअनुहारहरु ‘एक्क टाँका–एक्क टाँका’ भन्दै पछ्याउदैछन् त कतै चुरोटको सर्को आनन्दले उठाइरहेकी विकासे कार्यकर्ताको रवाफ झ्याम्मिरहेको छ । ‘विद्या ! तिमी त के सारो निष्ठुरी, कमसेकम एककल फोन त गर विचरालाई, मेरो नभएको प्रेमी सम्झिरहनुहुने/सम्झाइरहनुहुने बिपि दाजु र साधना दिदीहरु एकातर्फ हुनुहुन्छ नै । अर्कोतर्फ, झिङ्गे माछा भनेर प्लेटभरी सजाइएका गंगटाजस्ता पक्वानको गन्ध हो कि बास्नाले नाकलाई छोडेकै हैन । कृतज्ञ त हुने नै भए, त्यो अन्जान आत्माप्रति जसले नेपाली र भारुसहित झण्डै एकसय पचास डलर उदारतापूर्वक छोडेर पर्सको भित्रिकुनाको सय डलर मात्र टप्काएछ (जुनकुरा फर्केको भोलिपल्ट बैंकमा पुगेर मात्र थाहा पाउने हुस्सुप्रसाद मै हुँ ) । खोइ के लेखौं/के चाहिँ नलेखौं, लेखौं कि लेख्दै नलेखौं अल्छीका दुविधा बढ्दा छन् । खैं कुन अन्तरप्रेरणाले हो अक्षरहरु पोखिन लागे । त्यसो त डायरी लेख्ने बानि नभएपनि घर बाहिर रहदा वा यात्रारत हुदाँ दुइ हरफ नै सही, लेख्ने गर्छु । अहिले तिनै पानाहरु पल्टिरहेछन् सरर..... । <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
'राम्ररी जा है, पुगेर फोन गर् नि ।‘
रुखो मिजासको मेरो ठूलो भाइ म निस्कनै लाग्दा बडो मायालु बनेको थियो । किनकिन मनै भारी भएर आयो, बोल्न लाग्दा शब्दै घाँटिमा अड्किए झैं भयो । ‘लौ यो त रुन लागी’ मोटरसाइकल स्टार्ट गरेर पर्खिरहेको सानो भाइले जिस्क्याउन भ्याइहाल्यो । केही नबोली ड्याड–मम, भाइबैनी र बरपरका सबैलाई टाटा गरेर हुइकिएँ म, विमानस्थलतिर ।
हतार भएको बेला ट्राफिक जाममा फस्नु , आवश्यक परेको बेला फोन नलाग्नु त हाम्रा दीर्घ रोगहरु नै हुन् । त्यस्तै भयो, गंगबुदेखि नै शुरु भएको जाम एयरपोर्ट सम्मै जारी थियो । एनटिसिको नेटवर्क ब्यस्तताको भो कुरै नगरौं । उसै त चिसो झन् पानीका सिर्काहरु पनि खस्न लागे । लगातारको जाम र ढीला भयो भन्ने अत्यासले आँखाबाट बर्षन लागेको झरी भने बीचैमा रोकियो । त्यसो त म कुनै दूरदेशको यात्रामा वा लामो समय अबधिको लागि पनि जादै थिइनँ । तरपनि त्यो मेरो पहिलो अन्तराष्ट्रिय भ्रमण थियो । South Asia Social Forum को ढाका सम्मेलनमा सहभागी हुन जादै थिएँ म । पर्यावरणीय लोकतन्त्रमा लागी दक्षिण एसियाली संवाद (South Asian Dialog for ecological Democracy -SADED) को प्रतिनिधीको रुपमा, भ्रमणलाई ब्यबस्थित गरिदिने जिम्मेबारी बोकेको संस्था एक्सनएड नेपाल (Action Aid Nepal) को टिमसँग ।
सात बज्नै लाग्दा एयरपोर्ट त पुगे, मान्छे यत्ति कि म त हेरेको हेर्यौ भएँ । अनि पो ज्ञात भयो, किन विमानस्थलभित्र तीनघण्टा पहिल्यै छिर्न भनिदो रहेछ । सुनिन्छ, दैनिक तीनसयको हाराहारीमा श्रम बेच्न बिदेसिन्छन् रे नेपालीहरु । दिन दुइगुना रात चारगुना बिदेसिनेको संख्या बढिरहेको परिपे्रक्ष्यमा मलाई पनि कतिन्जेल बाबाआमाको काखमा लुपपुटिदै कुपुकुपु खाइरहन शरम नलाग्ला र ? खैर....यो पटक केही सिक्न, हेर्न र बुझ्नको लागि जादैं थिएँ म । ‘ल ल साढे आठ बजेको कतार एयरवेजका यात्रुहरु अगाडी पठाइदिनु’। ‘नौ बजे मलेसिया जानेहरुको प्लेन छुट्यो है ?’ हाहाकार नै हाहाकारमा दुइघण्टा चिप्लिसकेको थियो । धन्य मेरा शुभेच्छुकहरु, जसको फोन र एसएमएसले त्यो उकुसमुकुसमा भेन्टिलेसनको काम गरिरहे, गर्दै रहे ।
बल्ल–बल्ल भीडबाट उछिट्टिएर युनाइटेड एयरवेजको जम्मो विमानमा पुग्यौ हामी । हाम्रा रात्रिबसभन्दा कम्ती आँक्न नमिल्ने त्यो,‘जुन सिटमा बसे नि हुने रे ल’ निर्धारित समयभन्दा दश मिनेट ढिलो नौ पच्चिसमा काठमाण्डौंलाई किनारा लगाउदै क्षितिजमा उक्लियो । कृण्णभिरमा बस अड्के झैं घ्यार्याक्क.. कुलिर्दै बतासियो त्यो माथी–माथी–माथी । रातको अन्धकारले छोपिसकेको थियो, त्यस्तोमा देख्नु हेर्नु के थियो र ? यताउता चियाएँ । पाका र परिपक्व अनुहारदेखी म जस्तै र म भन्दा पनि कलिला अनुहारहरु यात्रारत थिए,महिला–पुरुष झण्डै बराबरी । अचम्म त तब लाग्यो जब थाहा भयो, ती सबै मलेसिया जादै रहेछन् । खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार भएर जानु सहज कुरा हैन, सुनिदै आएको कुरा हो तर सुनेर के गर्नु ? पापी पेट छ, परिवार छ । सायद भविष्यका सपना पनि हुदो हो ती निश्चल आँखाहरुमा जो लुक्दै बगिरहेका थिए । उफ्........ चिमोटिएँ भित्रैदेखी ।
घत्याक्क..... सोच्दासोच्दै झकाएछु क्यार, जीवनमोहले कक्रक्कै पार्यो । तल पिलपिल जुनकिरी झैं बलिरहेको ढाका शहर थियो । मौसम अपेक्षाकृत सफा नभएकोले केहीबेर आकाशमै फन्को लगाउदै विमान ओर्लियो । भर्खरै पानी रोकिएको रहेछ । स्वागतार्थ उपस्थित थिए,भिजेका भूई र बंगाली हावाको नुतन स्पर्श । अध्यागमनका सानातिना कारबाही पछि होटल प्यासिफिक इनको प्ले कार्ड लिएर उभिएका खान दाजुसम्म पुग्यौ हामी । यतिबेलासम्म हाम्रो एघारजनाको टोली एकिकृत भैसकेको थियो, होटलको प्राइभेट गाडी केहिबेरमै गुड्यो सररर... । झिलिमिली बत्ती, सानाठूला बगैचाहरु, तुलनात्मक सफा सहर आफ्नै पूर्वी शहर धरानको याद आयो मलाई । हाम्रो भन्दा बीस मिनेट छिटो बंगलादेशको घडीमा बाह्र बज्नै लाग्दा बनानीस्थित होटल प्यासिफिक इनमा भित्रियौ हामी ।
दोश्रोदिन बिहान अबेर गरी आँखा खुल्यो । घामको किरणले चुम्दा जीवनले नयाँ रङ्ग पायो । सम्मलेन त भोलिपल्ट (-Nov 18 _) देखि थियो, हामी टिकटको समस्याले गर्दा दुइदिन अघि (Nov 16) नै त्यहाँ पुगेका थियौ । बीचको यो दिन हाम्रो लागि फुर्सदी दिन, बिहानको नास्तापछि घुमघाममा निस्कियौ (कपिल काफ्ले जो नेपाल समाचार पत्रसँग आबद्ध हुनुहुन्छ बाहेक) हामी दशजना । होटलका मार्केटिङ मेनेजर बाटैमा भेटिए, बाटैमा छुट्टिए । बाँकि हामी मनमौजी पाराले यतायता रल्लियौ । यात्रामा पारङ्गत दाजुदिदीहरु यो ठाउँ त दिल्ली जस्तो, यो कलकत्ता जस्तो, यो कहाँ जस्तो... भन्दै तुलना गर्दै हुनुहुन्थ्यो । हुदाहुदा, हाम्रा बाग्मती र बिष्णुमती किनारालाई मात दिने फोहरी र अस्तब्यस्त बस्तीहरु पनि भेटिए । अनि रुद्र दाइहरु भन्न थाल्नु भो, यो जनकपुर जस्तो पो रछ । आ–आफ्नै अनुभूतिका पुन्तुरा कस्दै हिडिरहेथ्यौ हामी, केही किन्दै र केही किनेजस्तो गर्दै । त्यस्तैमा आइपूग्यो, बनानी सुपरमार्केट । बिपि दाजु र गणेश दाजु कुन्नी के किन्न भित्र छिर्नु भो, हामी परिबेश नियाल्न । ’एक्क टाँका, एक्क टाँका‘ को स्वर लहरी गुन्जियो कतैबाट । हेर्छु त, हाम्रोतिर गोरा छालाका मान्छे देख्नासाथ बुझ्नु न सुझ्नु पछ्याउनेहरुको ताँती लागेजस्तै, त्यहाँ एक्क टाँका भन्नेहरुको लर्को लागिसकेछ । आफूसँग खुल्ला टाँका भए न दिने हो (?), थियो त भर्खरै साटिएको हजार र पाँचसयका नोटहरु । त्यही दिएर तिनहरुसँगै हिड्न पनि नसकिने उफ्..... कत्रो समस्या । न आफूले बोलेको बुझ्छन् तिनीहरु, न त तिनले बोलेको आफू बुझिन्छ । नेपाली पैसा देखेर आफैं पन्छिएलान् की ? जुक्ति निकाले तर पासा उल्टियो । हेर्दाहेर्दै, बोली नफुटेकादेखी कपाल पाकिसकेका पचासौ माग्नेहरुको घेरामा फसेँ म । अनि त सुपरमार्केटका सिभिल सेक्युरिटी, स्थानीय बासिन्दा र हाम्रो टिमै भएर खेद्नुपर्यो । मलाई दुःख छ, त्यो बिचरी एउटी बच्चीप्रति, जो आफ्नो झुण्डसहित होटलसम्मै आइरही, अन्ततः ल्याम दाजुको पिटाइ पाएर फर्की ।
यसरी अन्धाले हात्ति छामेजस्तो नजर–नजरमा ढाका बदलिदै गयो । साँझ गुल्सन बजारतिर लाग्यौ हामी । गुल्सन एक र गुल्सन दुई त्यहाँका स्थानीय, केही चलेका बजारहरु । बजार नीति भने हाम्रै पाराको । बार्गेनिङ गर्न सके सक्यो, सकेन चुलुम्मै ।
तेश्रोदिन ढाका युनिभर्सिटीमा सम्मेलन शुरु हुने दिन । कार्यक्रम त साँझ शुरु हुनेवाला थियो तैपनि त्यहाँको ब्यबस्था के रहेछ बुझौं न त भनेर लाग्यौ हामी (अघिल्लो साँझ मात्र आइपुग्नुभएका एक्सनएडका राजकुमार त्रिखत्री दाजुसहित बाह्र जना) । के अचम्म हो, अघिल्लो दिन हाम्रो जनकपुर जस्तो लागेको ढाका शहर त्यो दिन पुरै अर्को पो थियो । दुरदर्शी पाराले बनाइएका फराकिला सडक, चोकचोकमा कुदिँएका बंगाली सभ्यता र विरतामा मानक चित्रहरु, माथीतिर आँखा उचालेर हेर्नुपर्ने भब्य भवन । ‘कसो ढाका भन्नु त जनकपुरजस्तो रहेछ’ भनेर फेसबूकमा लेखिएन वा ट्विट गरिएनछ है ? एकअर्काको मुखमा हेर्दै हास्ने क्रम रोकिएकै थिएन, हाम्रो गाडी रोकियो । सहिद मिनारको आडैमा रहेछ युनिभर्सिटी । भारतीय, पाकिस्तानी, फ्रान्सेली, श्रीलंकन, बंगाली, नेपाली ........ असमान र अपरिचित अनुहारहरुको ब्यस्ततत् संगम ।
संसारमा सबैले बुझ्ने साझा भाषा ‘मुस्कान, साटफेर हुदैं गए, उत्सुक नजरहरु छरिए यत्रतत्र । लौ, कार्यक्रम शुरु हुने दिन भएर पनि केही सुरसारै छैन । न स्टेज बनाइएको छ, न ब्यानर नै आइपुगेका छन् । बस्...स्टल राखिएको छ, सहभागिता फर्म भर्न । 'ब्यबस्थापन चाहिँ फितलै हुदोरहेछ है तिमीहरुको पनि' मनोबादमा अल्झदै पाँच–पाँच डलरको फर्म भरेर फर्कियौ हामी होटल प्यासिफिकतिर । ‘यतै खाना खाएर जाउ न हुन्न ?’ प्रस्ताव हामीमध्ये कसैको थियो । स्विकृतीको लाहाछाप स्वरुप बसुन्धरा सुपरमार्केट नजिकै ब्रेक लाग्यो गाडीको । खाना त त्यहाँ पनि त्यस्तै थियो जस्तो बसेको होटल, अन्य होटेल वा युनिभर्सिटी–क्यान्टिनको । बिचित्रको काइदा, म भेज खान चाहन्छु भनेपनि (मौसमी तरकारी हुनसक्छ लौका र मूला) लौका–मूलामा मासुको रस मिसिएर आउने, म मासु खाना खान्छु भनेपनि मासुमा लौका,मूला मिसिएर आउने । माछाको त आफूलाई (सु)गन्ध पनि मन नपर्ने । फेरी हाम्रोमा जस्तो थालमा पस्किएर कसले देओस् ?आफू अघिल्तिर आफूभन्दा ठूला बाटाभरी राखिएका भातका रास, जति मनलाग्छ लियो खायो । ‘मन चंगा भए लोटाँ गंगा’ भनेजस्तो जूठोचोखो बाल मतलब । त्यति नै बेला कसैले जिस्क्याइदिन्थ्यो, ‘विद्या मासु त गाईको हो रे ।’अनि त के चाहियो ? खादा–खादै पेट बटारिएर आउथ्यो ‘ह्वाक्क’। म त अझ साहाकारी हैन, साहाकारीहरुको हालत ... (?) । खाना चाँहि खाइन्न अब, तेश्रो साँझदेखी प्रतिज्ञा नै गरे मैले । ब्लडप्रेसर घटेर टाउको फुट्न खोज्दाको पीडा पनि त राम्रै भोगेँ नि ।
१८ नोभेम्भर साँझ उद्घाटनपूर्वको र्यालीमा मिसिदै सम्मेलनमा सहभागी भयौं हामी । १९, २० र २१ मा त्यहाँ खास कार्यशालाहरु भैरहे । अन्य राष्ट्रसगै नेपालबाट पनि दलित, महिला, अल्पसंख्यक, सामाजिक न्याय र रुपान्तरणका पक्षमा काम गर्ने संस्थाहरुको ठूलो समुह त्यहाँ पुगको रहेछ । थोरै सख्या विमानबाट, धेरै बस र ट्रेनबाट । बिश्वभरबाट २०,००० सहभागीको अनुमान गरिएको त्यो सम्मेलन बिशेष त "Democracy for Social Transformation in South Asia: Participation, Equity, Justice and Peace" नारामा केन्द्रित थियो । नेपाली संस्थाहरुका तर्फबाट पनि प्रशस्तै कार्यशाला,गोष्ठिहरु भए । Gender & Equality/ Globalization, Justite & development/Responsive Governce/ Human Right & Dignity/ Food Sovereignty and Livelihood Security/ Socialism vs Communism लगायतका छलफल,गोष्ठिहरुमा रह्यौ हामी । जुन विषयको दायरा विश्व सामाज हुदैं दक्षिण एसियाली समाजसँग सबन्धित थियो । यहाँ रहदा हामीले जतिसुकै केही गर्न सकिएन र भएन भन्दा पनि हाम्रोमा पनि तुलनात्मक रुपमा केही न केही त भैरहेकै छ । सामाजिक रुपान्तरणका पक्षमा कतै न कतैबाट पाइला त बढाउन थालिएको रहेछ भन्ने लाग्यो । त्यो भन्नका लागि मात्र भनिएका कुरा हुन् भने त सबन्धितलाई मात्र थाहा होला ।
कार्यक्रमकै दौरानमा यताउता गरिरहदा भर्चुअल दुनियाँबाट बास्तविक दुनियाँमा पर्दापण भइदिएर यात्राभरीकै दामी सप्राइज दियो पुरानो भएर पनि नयाँ/नयाँ भएर पनि पुरानो साथी प्रविणले । आफ्नोपनको आभास छरिदिए, निर्मल र योगेशले । आफूले चाहेर पढ्न नपाएको विषय मेडिकल साइन्स, तिनीहरु त्यसैका बिद्यार्थी कताकता लोभ लाग्यो नै । त्यहाँको बिद्यार्थी मैत्री शिक्षा प्रणाली, मिहिनेत गर्नेहरुका लागि उपलब्ध अतिरिक्त सुबिधा आदीको बारेमा परिचित हुदैँ आँखाले एकैचोटि टेक्न नसक्ने त्यो बिश्वबिद्यालय क्षेत्र राम्रै चाहरियो । विश्वविद्यालयका भिन्न कुनाका भिन्न हल सेनेटबाट टिएसटि, टिएसटिबाट मुकरम भवन..........गर्दैमा २२ नोभेम्बरको साँझ ढल्कियो । त्यतिन्जेलसम्ममा हाम्रा पाइलाहरुले राम्रै चक्कर लगाइसके थे बेङ्गो मार्केट, न्यू मार्केट, मोतिजान, बसुन्धरा मार्केट लगायतका बजार क्षेत्रको । हा..हा.. हु.. हु.. र फोटोसोटो त के कुरा गर्नु र? निःसन्देह म आफैंमा फोटोप्रमी त्यसमा पनि ’एक मुस्कान बराबर एक क्लिक‘ नियमै जस्तो बन्यो कतैकतै । पछि पो एसके दाइको स्व–अध्ययन प्रतिवेदनले, मैले सदैब सहज र छरितो मानेको पहिरन टिसर्ट–पेन्टलाई दोषी देखाइदियो (अन्दाज गलत पनि त हुनसक्छ ) । हुनपनि, ढाका राजधानी शहर भएर पनि कुर्ता सलवार र सारी मात्र पहिरिदाँ रहेछन् केटीहरु । बुर्का भने केही हदसम्म कम भएको हो रे । बैंकमा भेटिएका एकाध बाहेक अन्य क्षेत्रमा महिला सहभागिता शुन्य प्रायः । उदेकलाग्दो कुरा, त्यो राष्ट्रको स्टेरिङ महिला कै हातमा छ ।
२३ नोभेम्बर, त्यो एक बिहान किन खेर फाल्नु? आयौं, न्यू मार्केट । साँझ ४:१५ को फ्लाइट, १ बजेतिर निस्कन परि गो । लगेजहरु मिलाउन प्रयाप्त सहयोग गरे होटलका स्टाफहरुले । हुन त, हामीमध्ये कति जनाको तिनीहरुका प्रति थुप्रै गुनासा थिए , मेरो भने ती घनिष्ठ । अझ भन्नैपर्दा,समवयका साथीहरुको अभाव पुरा गर्ने पनि तिनै । शुरुमा त मलाई पनि जंगली लाग्थे ती,‘मेरो नभएको पतिको बारेमा सोध्ने पनि, छैन भन्दा सन्देशसूचक नजरले हेर्ने पनि‘ । पछि पो थाहा भयो, बंगाली संस्कृतीमा फूली/नत्थी ले हाम्रो सिन्दुरपोतेको समानान्तर अर्थ राख्छन् रे ,कुरा बुझेर एक मेलो हाँसेथ्यौ हामी । ‘अब कहिले पो भेट होला र ?’ छुट्टिनुको नमीठोपन बोध गर्दै हल्लिए हातहरु बाइबाइ.............. । मेरो नाक देखाउदै पुरानो याद पनि स्मरण गर्न भ्याए डलर र आफताफले ।
फराकिला सडक हुनुको बाबजुद (रिक्सा, टेम्पु, टाङ्गा लगायतका तिनपाग्रे साधन र तिनको पत्याइनसक्नुको दादागिरीको करामत हुनुपर्छ ) सधैं नै जाम खेप्ने सडक कसरी हो अलि खुल्ला नै रहेछ । दुइतल्ले बस, कार, फाट्टफुट्ट मात्र देखिने मोटरसाइकल....सँग कहिले लय मिलाउदै ,कहिले अघि–पछि हुदै गाडी गुड्दै गयो । पछाडी छुट्दै गयो, आफ्नो भाषा र संस्कृतिप्रती बडो बफादार त्यो समाज, अग्रेजी र हिन्दी मोहबिना नै मुस्कुराएका अनुहारहरु, बंगाली भाषाको स–गर्व उपस्थिती दर्शाइरहेका सभ्य साइनबोर्ड/होडिङबोर्डहरु,लामालामा दारी–जुङ्गाधारी प्रहरीहरु ...... । संयोग नै मान्नुपर्छ, त्यतिबेलै हाम्रै सम्मुख भएर ओझेल पर्यो एउटा रातो रेल ।
बिमानस्थल आउनु नै थियो, आइपुग्यो । न हाम्रोमा जस्तो कोचाकोच ,न त ढिलासुस्ती । सामान्य जाँचपडतालपछि अध्ययागमन कक्ष गफगाफ सेन्टर बन्न बेरै लागेन । ममता दिदीको हसिमजाक, रघु लामिछाने दाजु (जो नागरिक दैनिकमा आवद्ध हुनुहुन्छ)को बौद्धिक/अपत्यारिलो तार्किक–शैली, म फुच्ची भएकोले (संख्या) जनामा गन्नै तयार नहुने गणेश दाजुको चतुर बाककौशल पुनः मज्जाले उछालिए । ड्युटी फ्रिबाट सहयात्रामा मिसिए, थुप्रै लब्ध–प्रतिष्ठित मदिरा–बोतलहरु । बंगलादेशमा पो रात्रीजीवन र मदिरा प्रतिबन्धित छ,हाम्रोमा थोरै छ र ?
विमानको धर्म उड्नु, उड्यो निर्धारित समयमै उही शिल्पी मुस्कानवाली एयरहोस्टेजसहित । उड्यो मन, जहाजको टुक्रेझ्याल हुदैं कताकता । लाग्यो, क्षितिजमा कोरिएको इन्द्रेणी रेखा पछ्याउदैं सयररत नजरहरु ‘टाढा भनेर जान नसकिएको कल्पनातीत समुद्र्र’ (देखिएको क्षेत्र समुद्र नभएर समुद्रको कल्पना मात्र पो थियो कि?) मा चोपलिए । जे–जे देखिए, जस्तो–जस्तो देखियो, देखिन्जेल हेरियो । निष्पट्ट भएपछि जहाजभित्रै कैद भए उत्सुकताहरु, तर चिसिन नपाउदै भेटिए केहि आक्रोशका राँकाहरु । जसलाई दलालले मनग्य ठगेछन् र कामको करार पनि असमय मै सकिएछ । आवेगका झिल्काहरु झलमलाउदै गर्दा देखा पर्यो, घर्लम्म साँझको घुम्टो ओडेको मेरो काठमाण्डौं । बालाचतुदर्शीको महाजाममा बन्दी रहेछ शहर । दुःस्वप्नहरुले कायल म भाइ आइपुग्नासाथ टाप कसे।
अहिले, संस्मरणका टाकुराबीच अदबकासाथ अग्लिएको छ ’पहाडविहीन (त्यहाँ कुनै टाकुरा नै थिएनन् वा गगनचुम्बी महलले छेकिए, त्यो म जान्दिन)¬ ढाका यात्रा ।‘ तमाम यादमा बीच उसैगरी उभिइरहेको छ एउटा जिज्ञासा, ‘अरु त अरु, नेपालीले समेत किन मलाई पाकिस्तानी ठाने/सोचे ?’
(पुनश्च:सम्पूर्ण सहयात्री मनहरुमा मीठो सम्झना, संस्थाहरु SADED +Actionaid Nepal हाद्धिक आभार )